Kuboshwe umngcwabi 'ontshontshe' ibhokisi - Ilanga News
Home Izindaba Kuboshwe umngcwabi ‘ontshontshe’ ibhokisi
Kuboshwe umngcwabi ‘ontshontshe’ ibhokisi
Kuthiwa elishibhile kulolu hlobo libiza uR35 000
LAPHA yingesikhathi amaphoyisa eselande ibhokisi elebiwe ‘namadlelo aluhlaza’ kanti kuboshwe umngcwabi ngalokhu. ISITHOMBE: SITHUNYELWE
UNGENE kweli-khulu ihlazo umngcwabi wa-soNdini oboshwe emuva kokubhadanywa nebhokisi lomngcwabo namadlelo aluhlaza, okwebiwe.
Lesi sigameko esenzeke ngoLwesihlanu, sishiye abantu abaningi bebambe ongezansi emuva kokuba leli bhokisi lohlobo lweDome, okuthiwa belebiwe kwaCelani Funeral Services ngoLwesine, litholakale ehhovisi lomsolwa naye ongumngcwabi, wabe esekhalelwa ngamasongo kasiGonyela.
Kuthiwa umsolwa uboshwa nje, ubeke waya kulaba bangcwabi efuna imininingwane ngaleli bhokisi lohlobo oluphambili. Umthombo uthi umsolwa ufike emahhovisi akwaCelani Funeral Services, wabuza kabanzi ngaleli bhokisi okuhlanganisa nenani lalo. Kuthiwa kuthe uma etshelwa inani, wa-cela isaphulelo.
“Kuthe uma engasitholi isaphu-lelo, wahamba. Ezintatha zangoLwesine kugqekeziwe emahhovisi akwaCelani, kwebiwa leli bhokisi abebuza ngalo, iziphambano na-madlelo aluhlaza. Izisebenzi zithe zifika nje ekuseni zabona ukuthi kugqekeziwe, kwabe sekubikelwa amaphoyisa,” kusho umthombo.
Umkhondo wamaphoyisa uwaholele lapho esebenzela khona lo mngcwabi, eyobuza ngebhokisi.
“Amaphoyisa anikele emahhovisi akhe azithela kulona leli bhokisi namadlelo aluhlaza kufihlwe kwi-container esebenza nje-ngehhovisi lakhe. Siyasola ubese-lidayisile ngoba kuthe amaphoyisa esamatasa lapho kutholwe khona ibhokisi, kwafika omunye umndeni uzolilanda esikholwa wukuthi ubusulithengile,” kusho umthombo.
UMnu Musa Dumisa ongumnikazi weCelani Funeral Services ethintwa ngalolu daba, uvumile ukuthi kugqekeziwe emahhovisi akhe asoLundi kwebiwa ibhokisi.
“Ngizwile ngalesi sigameko ko-dwa ngeke nginabe kakhulu ngaso ngoba konke sekusezandleni za-maphoyisa,” kusho uMnu Dumisa.
UMnu Muzi Hlengwa weNational Funeral Practitioners Associ-ation of South Africa, uthe kuyosiza kwesinye isikhathi ukuba aba-ngcwabi babe yizingxenye zezi-nhlangano ngoba kuyaye kugweme isimo esifana nalesi.
“Kuyasiza uma umngcwabi engaphansi kwenye yezinhlangano zabangcwabi ngoba uma ebhe-kene nenkinga yokuba nomthamo omningi angasakwazi ukumelana nawo, uyakwazi ukucela usizo inhlangano ingenelele.
“Lokhu kungahlanganisa ngisho nayo inkinga yokushodelwa ngamabhokisi. Nangesikhathi seCovid 19 kwakwenzeka ukuthi amabho-kisi ashodele abangcwabi kodwa babesizakala ngokuxhumana nezi-nhlangano zabo,” kusho uMnu Hlengwa.
Uthi ngokujwayelekile lolu hlo-bo lwebhokisi olwaziwa ngeDome, elishibhile kuwona lingabiza u-R35 000 kodwa kuncika ekutheni hlobo luni lolo ngoba ahlukene nawo.
Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal uCol Thembeka Mbhe-le, usiqinisekisile lesi sigameko. Uthe ukhona umsolwa oboshiwe ngecala lokutholakala nempahla eyebiwe kanti uzovela maduzane enkantolo.
Previous articleIndoda ‘igwaze yabulala’ indodana (9) yazilengisa
Next articleUsongela i-Al Ahly umqeqeshi weDowns